In Somali | Access Justice
Marka aan dhameystirno websiteka isla markiiba waxaa diyaar noqondoona qeybta ku qoran afka Soomaaliga. Inta ka horeysa bogaan ayaa matalaya qiimeynta aan u heyno bulshada Soomaaliyeed. Halkaan ayaan ku sharaxeynaa sida uu Helida Cadaalada (Access Justice) ay u caawin karno dadka.
Anagu kumaan nahay
Arigtida iyo shaqada kambanigaan
Dadka oo dhan waa iney helaan caawinida sharciga wadankaan. Anaga oo u taagan qeemeynta dadka, waxaan isu xilqaaney inaan dadka gaarsiino qiima jaban oo dadka danyarta ah, kuwa meelaha dhexe, dadka wadanka ku cusub, ururad dadka bilaashka u shaqeeya iyo ganacsatada yar-yarba ay iska bixin karaan.
Helida Cadaalada (Access Justice) waxaad ka helysaa la shaqeyn buuxda mana ah kambani ganacsi, waxaa loo sameeyey iney caawiso bulshada Soomaaliyeed oo aan heli karin caawina shariciga oo bilaasha ah, hadan aan iskabixin Karin qiimaha qaaliga ah ee sharci yaqaanadu ay qaataan.
Sidee ayaad u caawin kartaa aniga iyo dadka kale ee bulshada?
Waxaad u baahan tahay qibradayada.
Helida Sharcga (Access Justice) dadka ay ku xiran tahay iyo shaqaalaha sharci yaqaanka, waxay ka balan qaadeysa macaamiisha iney ka qanciso dhinaca sharciga. Sida wax yaalaha hoos ku xusan:
Dhexdhexaadinta iyo wax u qeybinta
Aruurinta iyo deynta
Daaficida dabiyada( Dadka waaweyn/dadka yar-yar)
Sharciga dadka duqoobey
Waxyaabaha quseeya Shaqooyinka
Sharciga Qoyska(Furitaanka, Caawinida, Korsiga caruurta aadan dhalin)
Dhaqaalaha dawladu bixiso
Shaqsi ahaan iyo xaquuqda bili-aadanka
Shirkadaha dadka lacag la,aanta ugu shaqeeya
Ku soo oogid dacwada waxyaalaha dad weynaha quseeya
Waxyaalaha quseeya ganacsiga Yar-yar
Waxyaalaha quseeya dhaxalka iyo caafimaadka
Iyo waxyaalo kale oo badan
Helida Cadaaladu (Access Justice) waa sii balaaraneysaa. Rabitaankeena ku saabsan in macaameesheenu hesho ilaalinta xaquuqdooda iyo maqlida codkooda ku saabsan dhinaca sharciga. Waxaan kale oo xaqiijineynaa in macaamiishu ay helaan saacidid sharciga oo ay awoodaan, wax kasta oo uu yahay. Sidaas ayaan ula shirkowney Somali Justice Advocacy Center. Oo aan rabnaa inaan ilaalino danaha ay leeyihiin Bulshada Soomaaliyeed.
Ayaa u qalma in Helida Cadaaladu (Access Justice) u shaqeyso
Waqtigaan, waxaan qadarint ugu horeysa sii neynaa macaamiisha dhaqaalahoodu ka hooseeyo 125% ama 350% federal poverty guideline. Helida Cadaaladu (Access Justice) sidoo kale waxay tixgelin siineysaa meelaha aan loo heynin wax sharci ahaan daafaca, anaga oo og inaad 125% ka hooseysid hadana waxaan tixgelin siineynaa raasumaalka reerka oo dhan. Waxaan la shaqeyneynaa codsiga Somali Justice Advocacy Center.
Waa meeqa qiimaha Helida Cadaalada (Access Justice) ay kuugu shaqeynayaan?
Inta badan shaqadeenu waa u bilaash (Pro bono) dadka dan yarta ah. Waxaan ka qaadeynaa lacag dadka meesha dhexe oo ah kuwa aan aad faqriga u aheyn, wax badana aan awoodin. Lacagta aan ka qaadeyno marna ka badan meyso $99.00 saacadii.
Ma ku hadashaa luqada Soomaaliga?
Waxaan la shaqeyneynaa Somali Justice Advocacy Center si aan kuu siino tarjumaan waliba fahmaya waxaad rabtid .
Sidee ula soo xariira Halida Cadaalada (Access Justice)?
Hadii aad heli kartid qof ku hadla luga ingiriiska, waxaad soo waci kartaa tel# 612-879-8092 ama 1-877-999-AJ OK (2526). Waxaan kaa qadeynaa meeshii aan kaala soo xariir laheyn, waana kugu soo celineynaa anaga oo wadana qof ku hadla afka Soomaaliga.
Waxaad kale ood naga soo xariiri kartaa Internetka adiga oo taabanaya linkiga hoose ama noo soo dir emailka info@accessjustice.net
Si kasta ood noola soo xiriirteyba, noo sheeq sida aan kuula soo xiriiri laheyn markaa kadib, ama telefoon ama e-mailkaba, hadii ay macquul tahay fadlan ka tag numberka telefonka. Ka atg aqbaar kooban oo aad ku sheegeysid dhibaatada ku heysa. Waxaan isku deynaa in qofka ku soo wacaya uu yahay qof qibrad u leh waxaad aad rabtid in lagaa caawiyo.